auto uye mudhudhudhu | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: auto uye moto
Hyundai H1 Grand Starex: tsananguro, mufananidzo
Iyo Hyundai H 1 Grand Starex iminibus yechikamu chemota yemhuri. Panyaya yehunhu uye hunyanzvi hunhu, ichakwikwidza nemhando dzepasi rose dzakadai seMercedes, Volkswagen, nezvimwe pa ...
ZAZ Vida (ZAZ Vida): magadzirirwo. Ongororo dzevaridzi
Auto ZAZ "Vida" muenzaniso wechiedza chemunhu wekutakura, icho chinogadzirwa zvese sechibhende uye sedan. Yakakura-kugadzirwa kugadzirwa kwakatangwa muna 2012. Imotokari iri kutengeswa muUkraine ...
ZIS-110. Soviet Executive mota
Motokari yemhando yepamusoro-soro ZIS-110 yakasikwa muna 1945. Iyo mota yaive yakagadzirirwa kushandira Kremlin nomenklatura, hurumende nemakurukota. Iyo modhi yaive yakatakura-inotakura furemu chimiro chesimba rakawedzera, inokwanisa kumira ...
Kayo 140: ongorora, yakatarwa, mafoto, kugadzirisa
Gomba mabhasikoro inzira inozivikanwa muEuropean, asi munharaunda yeRussia vanobatwa nekumwe kushamisika. Maitiro echikamu ichi imhando yekopi yakaderedzwa yemudhudhudhu we motocross. Gomba bhasikoro ...
Kondakita MTZ 1523: ratidziro uye ongororo dzemuridzi
MTZ 1523 ndeye akasiyana-siyana mavhiri ezvekurima tarakita yakagadzirirwa kuita rakapamhamha rakasiyana mabasa. Iyo modhi inoshandiswa kugadzirira ivhu rekudyara, kudyara, kurapwa kwembesa, kunobatsira mukukohwa uye ...
Turakiti T-4А: hunyanzvi hwakagadziriswa, mapikicha, kugadzirisa
Tarakita yaishandiswa zvakanyanya mune zvekurima neindasitiri basa, zvakagadzirwa nemabhizinesi mazhinji eSoviet Union. MuKazakhstan neSiberia iri kure, michina yeAltai fekitori yakashandiswa pakushanda. Idzi dzaive mota T-4, ...
Iyo Toyota yekuzviongorora inotanga sei: nhanho nhanho mirairo. Kuzviongorora-otomatiki kwekutapurirana "Toyota"
Iyo mota, sezvaunoziva, ndeyezvinhu zvekufambisa, asi kwete kune zvigadzirwa zveumbozha. Heano angori mutengo weimwe yekuongorora uye yekugadzirisa mashandiro inokanganisa kusahadzika pane izvi. Mune zvakawanda nzira izvi zvinoshandawo kune ...
"Mercedes W204": tsananguro, magadzirirwo, ongororo
Mercedes W204 chizvarwa chechitatu chemukurumbira wepakati-saizi mota muC-kirasi. Wakautangira yaive W203. Iyi mota yakaunzwa kune vezvenhau muna 2007, muna Ndira, uye munaKurume ...
Zvinorevei kuti Skoda bheji? Nhoroondo yeiyo logo
Zvinorevei kuti Skoda bheji? Mubvunzo unofarira vazhinji. Iyo logo yekambani inozivikanwa yeCzech inogadzira vafambi mota inomutsa masangano akasiyana. Vamwe vanoona shiri yakatambanudza mapapiro ayo nechekumashure kwepasi, vamwe museve unobhururuka, vamwe ...
Hondo dzehondo dzeRussia nenyika. Zvombo zvechiRussia
Mauto mumatunhu akasikwa kuti adzivirire pakurwisa kwakasiyana siyana uye nekuchengetedza miganhu, uye michina yemauto inodanirwa kuvabatsira mune izvi. Panguva imwecheteyo, vese vanhu uye tekinoroji zvakabatana zvakanyanya ...
Nhoroondo yeBSVAZ. Chokwadi chinonakidza uye mapikicha
Mumakore makumi matanhatu ezana ramakore rapfuura, zvigadzirwa zvakawanda zvemotokari zvakagadzirwa muUSSR. "Cossacks", "Volga" uye "Muscovites" zvicharamba zviripo mundangariro dzevagari venyika yedu sechiitiko chenguva dziri kure. Asi mu ...
Kuisirwa kwemakemikari anopesana nekuba masisitimu Ongororo yemhando dzakanakisa
Mechanical anti-kuba masisitimu anga achinyanya kudikanwa pakati pevatyairi kwenguva yakati rebei. Musika weRussia nhasi unopa huwandu hwakawanda hweanogadzira anti-kuba zvigadzirwa kubva kune akasiyana vagadziri. Nekudaro, kwete zvese zvigadzirwa ...
Jeep "Rubicon-Wrangler": mapikicha, kuongororwa kwevaridzi, kutaurwa
Munguva yeHondo Yenyika II, kambani yeAmerica Willis Motors yakagadzira iyo CJ SUV. Mota yakashandiswa zvese kumberi nekumashure. Kukwanisa kuyambuka-nyika kugona kuita mota yakakosha mumamiriro ezvinhu akaomarara emugwagwa. ...
Sarudzo uye hunhu hwemotokari Chevrolet Cruze Hatchback
Chevrolet Cruze imotokari inogadzirwa nekambani yeAmerica General Motors kubvira 2008. Iyi mota yakatsiva mota mbiri: Chevrolet Cobalt uye Chevrolet Lacetti. MuRussia, vakatanga kuiunganidza mufekitori ...
Shock anotora SS20. VAZ kudedera vanoyeredza
Kumubvunzo: "Mota inodhura here kana nzira yekufambisa?" - pane mhinduro dzinenge nhatu. Mumwe munhu achasarudza yekutanga sarudzo, mumwe wechipiri, uye vamwe - zvese panguva imwe chete. Uye chokwadi, senguva dzose, ...
Nei injini yedizili yaitiza: zvikonzero, mhedzisiro. Kuongororwa kwemagetsi enjini
Injini dzinowanzozivikanwa pari zvino idizili uye peturu. Wekupedzisira akazvarwa kare, asi ikozvino mukurumbira wake uri kudonha. Injini yedhiziri inoshanda zvakanyanya uye ine mari. Nekudaro, kuitira kuti mota ...
Kunyora motokari pamba
Chero dhizaini yekugadzira inokwanisa kugadzirisa kutaridzika kwemudhudhudhu wekare nenzira yekuti, kana ukasatarisisa, ungasazviziva. Idzi shanduko dzinoshamisa muchitarisiko dzinosanganisira kupenda. Ehe, vara idzva, varnish, ...
Skoda Yeti mota: clearance yepasi, maratidziro uye ongororo
Pakutanga, kunetseka kweSkoda kwakaburitsa sedans chete uye ngoro dzechiteshi, asi muna 2009 Yeti subcompact crossover yakapinda mumusika. Kuita, kugona kwepamusoro uye zvimwe hunhu zvagadzira mota iyi ...
ZiD-50 "Pilot" - inozivikanwa yeRussia moped
Dyara ivo. V. Degtyareva, anonyatso kuzivikanwa kwatiri saZiD, yakavambwa panguva yeHondo Yenyika Yekutanga. Ipapo ndipo pakatanga kuvakwa muKirov zvivakwa zvepfuti zveKovrov. Makore mazhinji gare gare,…
peji 1 peji 2 ... peji 154 Next Page
Mibvunzo ye63 mu database yakagadzirwa mu 2,390 masekondi.